August 2020 - Padaethar
မိခင်အပေါ်ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာဦးည၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း
August 31, 2020 Padaethar 0
မင်္ဂလာဦးည၌ပင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း မင်္ဂလာဦးညတွင်မင်္ဂလာဦးမောင်နှံအတွက် ညစာစားဖို့လင်ဗန်းအကြီးတစ်ခု၌ အလွန်ကောင်းပြီးအနံ့အရသာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အစားအသောက်များကို စားသုံးဖို့အခန်းတစ်ခုမှာအဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ သတို့သားက သတို့သမီးကိုစားသောက်ဖို့ခေါ်တော့ သတို့သမီးကမေးတယ်….ရှင့်အမေကော မစားဘူးလား.…?ခေါ်လိုက်ပါ အတူတူ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း စားလိုက်ကြရအောင် …. သတို့သားက အမေ အိပ်သွားပြီးထားလိုက်ပါ။ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ စားလိုက်ကြရအောင်…ဇနီးက ထပ်ပြောတယ်။ ကျွန်မသိတယ်ရှင့်အမေလည်း ထမင်း မစားရသေးဘူးခေါ်လိုက်ပါ အတူစားရအောင်ပြောတော့..အိပ်ပါစေ […]
သားညကျရင်ပွဲကြမ်းဖို့ဝယ်ထားတဲ့ ခွေးလျားနက်စေ့တွေ အဖေအကုန်ကြိတ်လိုက်သောအခါ ကျား အားတိုး​ဆေးထဲမာခွေးလျားနက်စေ့အကြောင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်…. ” မကြင်​မြ..” ” ​​ဘာတုန်းကို​ဆောင်း ” ” ငါ့ ​ခွေး​လှေးယားသီး အနက်​​စေ့​တွေ ဘယ်​မတုန်း…. ” ဟင်​…..ကျုပ်​လည်း ဘယ်​သိမတုန်း ၊ ​တော်​ကဘယ်​မှာထားလို့လဲ ” ” ​ကြောင်​အိမ်​​ပေါ် တင်​ထားတာ​လေ ” […]
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ (၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် – – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၉၃၂) ခု၊ […]
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ကိုယ်စုဆောင်းထားတဲ့ပန်းချီကားတွေကို ပန်းချီမြတ်နိုးသူတွေအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ပုံတွေ ၇ ရက်ဆက်တိုက်တင်ပြီးပြကြရင်း….. အပြန်အလှန်ဖလှယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုမှာ မိတ်ဆွေတဦးက Challenge လုပ်လို့ ကိုယ်အမြတ်တနိုးစုထားတဲ့ကားတွေထဲကတချို့ကို ပုံတင်ဖြစ်တယ်…။ အဲ့ဒီမှာ ၄ ရက်မြောက်နေ့တင်လိုက်တဲ့ မြတ်ရွှေတိဂုံ ရေ​ဆေးပန်းချီကားရဲ့အောက်ကမန့်တွေဖတ်ရင်း အစကတော့ ဘာမှကိုပြန်ရှင်းပြချင်စိတ်မရှိခဲ့ဘူး… ဒါပေမယ့် အမှားကို အမှန်ထင်နေတဲ့သူတွေ.. ပန်းချီအကြောင်းနကန်းတလုံးမှ […]
၁၁နှစ်သမီးငယ်လေးကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးရင်းလျှော့ခ်ဖြစ်ကာ နေရာမှာပင်သေဆုံးသွား
စိတ်မကောင်းစရာပါ ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါ …..ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယခရိုင် မဟာရတ်မြို့ကအသက် (၁၁ ) နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးကို ကျောင်းမှာ ဆရာဝန်တွေက ( Cervical Cancer Vaccine ) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီး … သိပ်မကြားဘူး ကလေးက ” ရင်ဘတ်အောင့်တယ် အောင့်တယ် ” ဆိုပြီး အန်တယ် […]
အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း အထူးကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
စက်တင်ဘာလအတွက်အထူးဟောစာတမ်း အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ဤလအတွင်း အိမ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဆောက်ပါနှင့် ငွေဝင်လာလျှင် မြေ၀ယ်ထားပါ။ အမှု မဖြေရှင်းရပါ။ တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ဆွဲပါ။ မဖြစ်မနေ ပြဿနာမှုတွေ ရှင်းရမယ်ဆိုလျှင် အရှုံးပေးလိုက်ပါ။ သူ့သဘော သူဆောင် ရလာသောငွေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေပါ။ ဘာမှလုပ်စရာ မရှိပါက ထိုင်နေပါ။ ဥာဏ်ကို […]
တနင်္လာသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း အထူးကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
စက်တင်ဘာလအတွက်အထူးဟောစာတမ်း တနင်္လာသားသမီးများအတွက် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီအကောင်း ပေးလာလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းက အကူအညီကောင်း ပေးလိမ့်မည်။လုပ်ငန်းအသစ်၊ အစီအစဉ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ ခရီးတိုး ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးသည်များသည်လည်း သင့်အတွက် ကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။ မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်ပါသည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ […]
ပိုက်ဆံ သိန်း (၂၀) နဲ့ လိမ်ပြေးစရာ မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ မင်းခန့်ကျော်
သရုပ်ဆောင် နေဒွေးကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း မြို့ပရိသတ်၊ နယ်ပရိသတ်အစုံရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေဒွေးကတော့ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိခဲ့သလို အမှုအခင်းပြဿနာအချို့နဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ကို သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားနှစ်ကား ဖြန့်ချီရောင်းချဖို့ ပေးခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်ကားတန်ဖိုးငွေများကို ပြန်လည် မရရှိခဲ့တာကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေလည်း ရှိခဲ့သေးပါတယ်….။ နေဒွေးကတော့ […]
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် (၉)လပိုင်း အထူးကံကြမ္မာဟောစာတမ်း…
စက်တင်ဘာလအတွက်အထူးဟောစာတမ်း အားလုံးသောမိတ်ဆွေများကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် လူမျိုးခြားက ကူညီခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်ခြင်း ဘုန်တန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ မနာလိုသူလည်း ပေါ်လိမ့်မည်။ ဤကာလအတွင်း မည်သည့်အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည် ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာနှင့်။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်သည်။ ဘုရားဆင်တုတော်၊ ပုံတော်၊ […]
WHO ကလဲ ဒီကိုရိုနာက ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေပြီ…
WHO ကလဲ ဒီကိုရိုနာက ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေပြီ။ ကမ္ဘာနဲ့ အဝှမ်းကူးစက်မှုတွေကလဲ ဆက်တက်နေဆဲပဲ။ မြန်မာပြည်လဲ တက်ရမှာပေါ့။ မထူးဆန်းပါဘူး။ အချင်းချင်း သိနေတာပဲကို။ အခု ရခိုင်ဖြစ်တော့လဲ ဘာမှထူးပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်မနေပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ နဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာမပျက် ဆက်သွားကြရတာပါပဲ။ ပိုးအသစ်က […]